Tariro uye Kutya
Vol. 14 NOVEMBER, 1911. Nha. 2
TENDA UYE KUTYA.
HOPE yakazorora pamasuwo eDenga ndokutarisa mukati memakanzuru evamwari.
"Pinda, unoshamisa!" akadana murwi wekudenga, uye mutiudze kuti ndimi ani uye chii chamungade kwatiri. ”
Tariro yakapinda. Iwo mweya pamusoro pake unakidzwa nekureruka uye nemufaro zvisati zvave kuzivikanwa kuDenga. Maari, runako rwakabata, mukurumbira wakaburitsa korona yake, simba rakapa tsvimbo yake, uye kupenya kwezvinhu zvese kuti zvifarirwe zvakavhurwa kutarisisa kwevazhinji vasingafi. Mwenje wechiedza wakaburitswa kubva mumeso aTariro. Akafema kunhuhwirira kusingawanzo pamusoro zvese. Kuita kwake kwakasimudza mweya wehupenyu mune rwiyo rwekufara uye kutsanangudza zviuru zvekunaka. Izwi rake rakadzamisa misoro, rakapinza pfungwa, rikarovesa moyo, rikapa simba idzva kumashoko, uye raive rinotapira mimhanzi kupfuura iro remakorisheni ekudenga.
"Ini, Tariro, ndakazvarwa uye ndakatumidzwa zita raTagan, baba vako, uye ndikarerwa naDesire, Mambokadzi wePasi pevhu, mutongi wematunhu epakati ezvose zvakasikwa." Asi kunyangwe ndakadanwa kuti ndive nemubereki wedu asingafi, ini ndiripo, ndisina vabereki, uye ndisingaperi sababa vevose.
"Ndakazevezera kuMusiki pakazvarwa zvinhu zvakasikwa, uye akandifemera mukati make." Pandakasimudzira zai rechisikwa, ndakanakidza hutachiona uye ndikamutsa simba rayo rehupenyu. Pakubata uye mafashoni epasirese, ndakaimba matanho ehupenyu uye ndakaenda kumharadziro yemarefu avo kuva mafomu. Mumatani akagadziriswa echisikigo ndakaimba mazita aIshe wavo pakuzvarwa kwevanhu, asi havana kundinzwa. Ndakafamba nevana vepanyika uye mune mapeans emufaro ndakataura zvishamiso nekubwinya kwaTafadzwa, cerator wavo, asi ivo havana kumuziva. Ndakaratidza nzira yakajeka yekuenda kuDenga uye ndikadzora kuonda kwenzira, asi maziso avo haagone kuona mwenje wangu, nenzeve dzavo hadziyaniswi neinzwi rangu, uye kunze kwekunge moto usingafi wasvika pavari kujekesa iwo mafuta andichapa, yavo mwoyo ichava maatari asina chinhu, ini ndichave ndisingazivikanwe uye ndisina kudzidza, uye ivo vachapfuura mukusaumbwa kwavakadanirwa kunze kwavo, vasina kukwaniswa izvo izvo zvavakatemerwa neChafunga.
“Neavo vandiona, handikanganwe zvachose. Mandiri, imi vana veDenga, onai zvinhu zvese! Neni munogona kumuka kupfuura pamusoro pezvidziro zvedenga rako rekudenga, uye muve nekumusoro nekumusoro-kureba zvisingaonekwi zvisati zvambodzidziswa Asi usanyengerwe mandiri, kana zvisizvo ucharasikirwa nehusimbe, kupererwa, uye ndokuwira pasi pakadzika peGehena. Asi, mugehena, kuDenga, kana kupfuura, ndichava newe kana uchidaro.
“Munyika dzakaratidzwa, chinangwa changu ndechekusimudzira zvisikwa zvese kunevasina kuwana. Ini handife, asi mafomu angu achafa uye ndichava nemafomu anogara achichinja kudzamara rudzi rwemunhu rwamhanya. Mune epasi rakaratidzwa pasi ini ndichadaidzwa nemazita mazhinji, asi vashoma vachandiziva sezvandiri. Vane moyo munyoro vachandirumbidza senge nyeredzi yavo yekurevesa, uye vanodzorwa nechiedza changu. Akadzidza anondidaidzira nhema uye kundipomera mhosva. Ndicharamba ndisingazikamwi munyika dzakaderera kuna iye asina kuwana mandiri. ”
Mushure mekutaura kudaro nevamwari vakafadzwa, Tariro akambomira. Zvino ivo vakati vachimunamira, vakamuka,
"Uya, anodikanwa," mumwe nemumwe akachema, "Ndinokuda iwe senge wangu."
"Mira," akadaro Tariro. “Ah, vana vo Musiki! vadyi venhaka yokudenga! Iye anonditi ndiri iye ndoga, anondiziva seni. Usakurumidza. Tungamirirwa mune yako sarudzo neReason, arbiter yevamwari. Chikonzero vanonditi nditi: Nditarise sezvandiri. Usanditadzira zvisiri mafomu mandinogara. Kana zvisizvo ini ndakagadzirirwa kuenda kudzungaira nepasi, uye iwe unozozvitungamira kuti unditevere uye ufambe pasi nemufaro uye kusuwa mune zvinogara zvichidzokorora chiitiko kusvikira iwe wandiwana ndakachena kwechiedza, uye nekudzoka, ndakadzikinurwa neni kuDenga. '
“Ini ndinotaura zveruzivo, kuropafadzwa, kusafa, chibairo, iko kururama. Asi vashoma vevanonzwa inzwi rangu vachanzwisisa. Ivo vanozondishandura mumutauro wemoyo yavo uye mandiri vachatsvaga mafomu ehupfumi hwenyika, mufaro, mukurumbira, rudo, simba. Asi, nekuda kwezvinhu zvavanotsvaga ndichavarudzira pamusoro pazvo; kuti kuti vawane izvi uye varege kuwana zvavanotsvaga, vanozombozvikurira. Kana ivo vakundikana, kana vachiita kunge vasvika zvakare vatadza zvakare, ndichataura uye vachateerera inzwi rangu uye vatangezve kutsvakazve. Uye vacharamba vachitsvaga nekukakavadzana kusvikira vanditsvaga ndega, uye kwete mubayiro wangu.
Iva wakachenjera, iwe usingafi! Teerera Chikonzero, kana kuti iwe uchagadzira hanzvadzi yangu mapatya, Kutya, sezvo zvichigere kukuzivikanwa iwe. Mukutya kwake anotyisa kune simba rekuburitsa uye uchine moyo yako sezvaanondivanza pameso ako.
Ini ndazvizivisa. Ndichengete. Usandikanganwa. Ndiri pano. Nditorerei sezvaunoda. ”
Ishuva kumuka muvamwari. Mumwe nemumwe akaona kuna Tariro asina kana chinhu chaakamutsa. Vane Matsi Kufunga uye vakanakirwa nemubairo mucherechedzo, ivo vakafambira mberi uye mumheremhere manzwi akati:
"Ndinokutora Tariro." "
Nechido chimwe nechimwe chakashinga kuswededza Tariro kwaari. Asi kunyangwe hazvo zvaiita sekuti aive ahwina mubairo wake, Tariro akatiza. Chiedza cheDenga chakabuda naTariro.
Sezvo vamwari vakakurumidza kutevera Tariro, mumvuri unotyisa wakawira pamasuwo eDenga.
Ivo vakati, "Ibvai, "Tinotsvaga Tariro, kwete Shadow isina."
Mukufema kwakadzika Shadow yakazevezera:
Runyararo rweRufu rwakagadzika pane zvese mukati. Space yakazununguka sekuzevezera kweyekutya zita remberi kutenderera nyika. Mukuzevezera uku kwakagomera kushungurudzika kwekushungurudzika, kuchemera kushungurudzika kweshungu dzenyika mukurwadziwa uye kushungurudzika kupererwa nezano rekufa kwevanhu vanotambura nekusingaperi.
"Huya," akadaro Kutya, "wadzinga Tariro uye wandidaidza. Ini ndakakumirirai kunze kwemasuwo eDenga. Usatsvaga Tariro. Iye ingori mwenje wechinguva chiduku, unopenya phosphorescent. Iye anopa mweya mweya kuzviroto zvisina kujairika, uye avo vanokosheswa naye vanova varanda vangu. Tariro yaenda. Garai mune dzenyu dzepadenga Denga, vamwari, kana pfuura magedhi uye muve varanda vangu, uye ini ndichakufambisa iwe nekufamba nepakati munzvimbo yekutsvaga chibereko cheTariro, uye haungazomuwani. Paanenge achida uye iwe uchisvika pakubata, unondiwana panzvimbo pake. Nditarise! Kutya. "
Vamwari vakaona Kutya uye vakadedera. Mukati memagedhi maive nehupenyu husina chinhu. Kunze kwese kwaive nerima, uye kudedera kwekutya kwakadonha nepadenga. Nyeredzi yakatsvuka yakakwenenzverwa uye izwi rakapera simba reTariro rakanzwika nerima.
“Usadzivisa Kutya; Iye mumvuri chete. Ukazodzidza nezvake iye haakwanise kukukuvadza. Kana wapfuura uye wakadzinga Kutya, uchazvidzikunura, wakandiwana, uye isu todzokera kuDenga. Nditevere, uye Rega Kufunga Kukuutungamirire. "
Kunyangwe Kutya akatadza kubatirira ivo vasingafi vakateerera inzwi reTariro. Vakati:
"Zviri nani kudzungaira munzvimbo dzisingazivikanwe uine Tariro pane kuva mudenga risina chinhu nekutya pamasuwo." Isu tinotevera Tariro. ”
Nedombo rimwechete mweya usingafi wakasiya Denga. Kunze kwemgedhi, Kutya akavabata uye ndokuvatakura pasi ndokuvaita kuti vakanganwe zvese zvimwe kunze kwaTariro.
Vachityairwa nekutya uye vachidzungaira mune nyika dzerima, izvo zvisingafi zvakauya pasi panguva yekutanga ndokutora nzvimbo yavo yekugara uye yakanyangarika pakati pevanhu vanofa. Uye Tariro akauya navo. Kubva kare, vakanganwa kuti ndivanaani uye havagone, kunze kwekuna Tariro, rangarira kwavakabva.
Tariro inonamira mumoyo wehudiki, anoona pauduku nzira yakasvinwa. Iyo yekare uye yakaneta inotarisa kumashure kwepasi kune Tariro, asi Kutya kunouya; vanonzwa huremo hwemakore uye nemutsa Tariro vanobva vatendeudza meso avo kudenga. Asi kana vaine Tariro vakatarisa kuDenga, Kutya kunobata meso avo uye havaone kupfuura kwegedhi, rufu.
Kutungamirwa nekutya, zvisingafi zvinofamba pasi mukukanganwa, asi Tariro unazvo. Rimwe zuva, muchiedza chinowanikwa nekuchena kwehupenyu, ivo vachadzinga Kutya, kuwana Tariro, uye vachazviziva ivo neDenga.